Akanjo - Tsarabika
Misy entana 3 isa.
Maillot de bain 3-6
"Maillot de bain" ho an'ny ankizy vavy 3 ka hatramin'ny 6 taona. Mitohy tena na "Une pièce" izy ity. Fitondra raha andeha hilomano eny an-dranomasina, na eny amin'ny dobo filomanosana. Misy karazany maro sy azo hisafidianana tsara. Miloka marevaka, ary misy haigony mahafinaritra
Maillot de bain 4 - 12
"Maillot de bain" natao ho an'ny ankizy eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 12 taona izy ireto. Fitondra mandeha milomana, any amin'ny dobo filomanosana, na ihany koa any an-dranomasina. Maivamaivana izy ireto ary misy karazany sy loko maro azo isafidianana
Jerena ny entana
Ankajo mafana ho an'ny ankizy fito taona, "Blouson" fitondra amin'ny ririnina sy ny andro mangatsiaka. Mitazona ny hafanana tokoa izy ity, ary manana satroka, hiarovana ny loha sy ny sofina. Misy "Fourrure" ihany koa ny ao anatiny, manampy amin'ny fitazomana ny hafanana tsy ho very.